AASraw Nootropics powder series suppliers - AASraw powder
/ Products / Nootropics powder
Isu tiri Nootropics podders powder vaperesi, Nootropics powders powder rekutengesa, Sezvatavimbisa, zvose zvedu zveNootropic powders powder zvine tsvina kunze kwe98%.
Nootropics powder, inozivikanwawo semishonga inonzwisisika uye inogadzirisa zvinogadzirisa zvinodhaka, zvinodhaka, zvinowedzera, uye zvimwe zvinhu zvinovandudza kugadzirisa kwebasa, kunyanya mabasa ekuita, chiyeuchidzo, zvisikwa, kana kuti zvinokurudzira, kune vanhu vane utano hwakanaka.
Kushandiswa kwekugadzirisa-kuwedzera zvinodhaka nevanhu vane hutano mukusavapo kwechirwere chekurapa ndechimwe chezvinhu zvakakumbidzana zvakanyanya pakati pevashandi vezvemishonga, masayendisiti, uye vanachiremba vanotarisa nyaya dzakasiyana-siyana, kusanganisira maitiro uye kururamisira kwekushandisa kwavo, zvinetso pamusoro pezvakaipa migumisiro, uye kukanganisa kwemishonga yemishonga yemishonga isina kushandisa, pakati pevamwe. Kunyange zvakadaro, kutengeserana kwenyika dzakawanda dzekugadzirisa-kuwedzera kuwedzera kune zvakadarika US $ 1 bhiriyoni mu 2015 uye kudiwa kwenyika kwezvinomera izvi kuchiri kukura nokukurumidza.
Nootropics powders powder - dzimwe nguva inonzi smart madawa - ndiwo makemikari anoita kuti uropi hushande. Vari kuve nzira yakakurumbira yekupa pfungwa dzako kuwedzera kukurudzira. Maererano nerimwe rondedzero yeTelgraph, kusvika ku25% yevadzidzi vari kutungamira vunivhesiti yeUnited States vakatora chiremba smart drug modafinil, uye California tech startup vashandi vari kuedza zvinhu zvose kubva Adderall kusvika kuLSD kuti vashandise ubongo hwavo mune gear yakakwirira.
Ndave ndichibatsirwa zvikuru kubva kuNootropics powders powder kubvira 1997, pandakanga ndichirwisana nekuziva uye ndakarayira madhora $ 1000 anokosha emishonga yakabva kuEurope (nzvimbo chete yaunogona kuwana nayo panguva iyoyo). Ndinoyeuka ndichitanga iyo isina kufanirwa yepepuru pakatsvaga uye ndichibvunza kana mishonga nemishonga chaiyo zvingaita kuti iwedzere hutano hwangu.
Vakaita, uye ini ndave ndiri fan guru chevamwe vanogadzirisa pfungwa kubva ipapo.
Ndine hanya nevamwe, zvakadaro. Dambudziko nekushandisa nguva yevheekeri se "Nootropics powders powder" ndeyekuti iwe unopisa marudzi ose ezvinhu pamwe chete. Unyanzvi, unogona kukaka kuti caffeine uye cocaine zvose zveNootropic powders powder, asi hazvina kuenzana. Neine nzira dzakawanda dzekuvandudza uropi hwako hunoita, huzhinji hwahwo huine ngozi huru, inokosha zvikuru kutarisa Nootropics powders powder pane imwe nyaya-ne-case based.
1) Modafinil ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inozivikanwa zvikuru yeNootropics powder zvakapoteredza. Uye nokuda kwechikonzero chakanaka: inogadzira mamiriro ekusimudzira mano ekuziva, anozivikanwa nekufungisisa, kumuka, uye kuisa pfungwa. Nekuda kweizvi, inoshandiswa nevashambadziri paInternal Station, vatambi venyika-vatambi uye vashandi vemuSouth fighter ndege.
2) Phenylpiracetam ishanduro yakashandurwa yePiracetam, iyo yekutanga yaNootropics powder compound. Nekuwedzerwa kweboka rePhenyl, Phenylpiracetam ndiyo nguva 10 inowedzera simba, uye inokwidza zvakakurumidza. Izvi zvinobvumira kunyange zviduku zvishoma kuti zvive nehukuru, huwandu hwekuwedzera kwenguva yekuziva nekugadzira.
3) Armodafinil Inovandudza Memory. Armodafinil analogo kuna Modafinil. Inogadziridza chiyeuchidzo chenguva refu uye inokurudzira kumuka kune varwere vane urope hwakawandisa kubva pakuvhiringidza kurara kwemafupa ekurara uye kushanduka kwehutano hwebasa.
4) Piracetam Inovandudza Memory. Piracetam yakagadziriswa kwenguva yakareba / kwenguva pfupi yekuyeuka chiyeuchidzo muvana 60 dyslexic.
Piracetam yakaratidza kuwedzera kukuru kwekutaura uye kusinganzwisisiki kwenguva pfupi uye kucherechedza kune varwere vanorwara nekuvhiyiwa.
Kurapa kusingaperi (250 mg / kg) zvakanyanya kuvandudza kushanda kwekuyeuka uye kuwedzera kukuchengetedza kuchengetedza (+ citicoline) mumakemikari ane zvinodhaka-induced amnesia.
5) Oxiracetam Inovandudza Memory. MuAlzheimer's or multi-infarct dementia patients, 800 mg oxiracetam kaviri zuva nezuva yakashandura mhemberero, isina zviratidzo zvekushivirira. Zvisinei, mamwe maitiro ekufungidzira aive akawandisa kupfuura zvinyorwa zvishoma shure kwekupedzisira kwekutevera.
Muvanhu, oxiracetam inoratidzirisa hukuru mukuyeuka zvinhu zvakaenzaniswa nepiracetam. Mumakonzo nemakonzo, oxiracetam yakarangarira chiyeuchidzo uye piracetam. Mukuwedzera, yakavandudzawo ruzivo rwekudzidza.
6) Pramiracetam Inovandudza Memory. Pramiracetam inoshambadzirwa semushonga wekuyeuka nekucherechedza kusakwana kwevanhu vakwegura neuropi inokonzera zvirwere uye vasementia yevascular. Pramiracetam ine nhamba yakawandisa inobatsira pakuvandudza pfungwa yevarwere nekushaya kwerojeni muuropi.
7) Phenylpiracetam / Phenotropil Inovandudza Memory. Nzira dze phenylpiracetam / phenotropil hadzisi kliniki yakajeka asi dzinofanira kunge dzakafanana nedzimwe mishonga mumhuri ye racetam.
Kuti utenge Smart-drug poda powders, edza kuva nechokwadi chokuti HPLC inoshuma pamwe chete neAAA nedzimwe nyumburu kuti uone kuti ivo vane unyanzvi uye hwepamusoro.
Achiratidza 1-8 pamusoro 13 zvabuda
KUGADZIRIRA UYE KUDZIVISA: Ino saiti Chinyorwa Inotengeswa Ekutsvagisa Chete. Mitemo Yekutengesa Nyorera. Kwete Yekushandiswa Kwevanhu, kana Kurapa, Veterinary, kana Kushandisa Kweimba.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.anonyij.com